Fameperana fitsangatsanganana frantsay sy tseky ary alemà vaovao
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fameperana fitsangatsanganana frantsay sy tseky ary alemà vaovao
Raha mbola miakatra ny isan'ireo aretina COVID-19 ary mipoitra ny karazana virus marobe, dia misy firenena mametraka fameperana vaovao momba ny dia.
Noraran'i Frantsa ny fitsangatsanganana rehetra mankany amin'ny firenena tsy eropeana. Eo ambanin'ny politika vaovao manomboka ny alahady izao, ireo mpitsangatsangana avy any amin'ny firenena UE izay mitady fidirana any Frantsa dia tsy maintsy manome porofo momba ny fitsapana ratsy ny virus coronavirus.
Ireo mpitsangatsangana avy amin'ny firenena eropeana sy afrikanina maromaro - Brezila, Angletera, Eswatini, Irlandy, Lesotho, Portugal, ary Afrika Atsimo - dia tsy avela hiditra any Alemana. Na izany aza, ny mponina alemanina mandeha avy amin'ireo firenena ireo dia hahazo fidirana, na dia manaporofo aza izy ireo fa voan'ny virus coronavirus.
Nilaza i Frantsa, Alemana ary ny Repoblika Tseky fa hamepetra ny fitsangatsanganana anatiny sy ivelany izy ireo ao anatin'ireo ahiahy momba ny aretina mikraoba mikraoba miparitaka manerana ny Vondrona Eropeana.
Nanampy ny praiminisitra frantsay fa ny aretina UK sy Afrika atsimo maro dia maro no mitarika "risika lehibe" amin'ny firongatry ny trangan'aretina virus any amin'ny repoblika, hoy izy nampitandrina, ary hakatona avokoa ny toeram-pivarotana lehibe rehetra ary hiparitaka lavitra kokoa ny mpanjifa misy kely kokoa manomboka amin'ny herinandro ambony.
Nilaza ny governemanta Alemanina fa handrara ny ankamaroan'ny mpandeha avy any amin'ny firenena izay mitatitra ireo karazana coronavirus areti-mifindra bebe kokoa tsy ho tonga manomboka ny asabotsy izao.
Ny Repoblika Tseky dia handrara ny fitsangatsanganana rehetra tsy ilaina any an-toerana manomboka amin'ny sasakalina. Anisan'izany ny olona mandeha miasa sy mianatra ary ireo manana fahazoan-dàlana maharitra na maharitra.
Malezia mikendry ny hampiroborobo ny fizahantany Silamo aorian'ny COVID-19
Ahoana ny fomba hamoronana endrik'i Herald amin'ny alàlan'ny areti-mifindra